Imidlalo yeBhodi yeBhodi yokuPhunyuka engama-25 eBalaseleyo | Ndinike ixesha lokuphumla
Eyona midlalo yebhodi ye-Escape Room
UIsake | 20/12/2021 14:55 | Ukuhlaziywa ukuba 20/12/2021 16:06 | ngokubanzi
Los imidlalo yebhodi Escape Room Basekwe kumagumbi okubaleka okwenyani, oko kukuthi, iiseti okanye iimeko ezinemixholo eyahlukeneyo kunye namagumbi apho iqela labathathi-nxaxheba livalelwe ekufuneka lisombulule uthotho lweepuzzle kwaye lifumane imikhondo ukuze likwazi ukuphuma kwigumbi ngaphambi kokuphela komdlalo. Imozulu. Umdlalo ophucula intsebenziswano, ukujonga, ubuchule, ingqiqo, izakhono, kunye nobuchule bobuchule bomntu ngamnye.
Impumelelo yala magumbi iye yandisa i imidlalo yebhodi yolu hlobo, ngakumbi emva kobhubhane, ekubeni uninzi lwala magumbi luvaliwe ngenxa yokhuseleko, okanye anemida ngokwamaqela anokungena. Ngoko unokudlala kwinduduzo yekhaya lakho, kwaye nosapho lonke okanye nabahlobo. Kukho kuzo zonke izinto ezithandayo kunye neminyaka ...
1 Eyona midlalo yebhodi ye-Escape Room
1.1 I-ThinkFun's Escape the Room: Imfihlo kaGqr Gravely
1.3 Igumbi lokubaleka uMdlalo wesi-2
1.5 Vula! IiHeroves zobuGcisa
1.6 Igumbi lokubaleka uMdlalo wesi-4
1.8 Igumbi lokubaleka uMdlalo wesi-3
1.9 Igumbi Lokubaleka Umdlalo: Ihlathi
1.12 Baleka eGumbi: Umnqa kwi-Observatory Mansion
1.13 Phuma: Indlu Elahliweyo
1.14 Phuma: uMboniso owoyikekayo
1.15 Imidlalo efihlakeleyo: Ityala loku-1-Ityala likaQuintana de la Matanza
1.16 Phuma: Ukufa kwi-Orient Express
1.17 Phuma: ISinister Mansion
1.18 Phuma: IMyuziyam engaqondakaliyo
1.19 Imidlalo efihlakeleyo: Ityala le-2-I-Scarlet Diadem
1.20 Phuma: Ingcwaba likaFaro
1.21 Phuma: ILebhu yeMfihlo
1.22 Phuma: Ubuqhophololo eMississippi
1.25 Phuma: Isiqithi esilityelweyo
2 Ungawukhetha njani owona mdlalo ubalaseleyo weGumbi lokuPhunyuka
Phakathi kwemidlalo yebhodi yebhodi ye-Escape Room kukho ezinye izihloko ezitsala ingqalelo eyodwa. Imidlalo engakholelekiyo ekuntywilisela kwisimo esineenkcukacha ezinkulu kwaye apho kuya kufuneka ucinezele ingqondo yakho ukuzama ukusombulula imingeni:
I-ThinkFun's Escape the Room: Imfihlo kaGqr Gravely
ThinkFun 76311, Baleka ...
Lo mdlalo ngowosapho lonke, njengoko kumnandi kwaye ulungele yonke iminyaka ukusuka kwi-13 leminyaka. Kuyo kufuneka usebenze kunye nabanye abadlali (ukuya kuthi ga kwi-8) ukusombulula amaqhina, iipuzzle, kwaye ufumane imikhondo yokuzama ukusombulula imfihlo emnyama kaGqirha Gravely.
Thenga iMfihlo kaGqr Gravely
Diset-Operation Escape ...
Umdlalo olungiselelwe abantwana ukusuka kwiminyaka emi-6 ubudala. Inamanqanaba ama-3 obunzima, kunye nochungechunge lwamavili e-roulette, izitshixo, amakhadi, i-cage, i-timer, i-decoder yokuvavanya, njl. Yonke into yokunxibelelana kunye nokusombulula imiceli mngeni yezakhono zesitshixo, iqhinga lemibuzo yobuchule, ivili lethamsanqa, njl.
Thenga i-Operation Escape Room
Igumbi lokubaleka uMdlalo wesi-2
I-Diset- Igumbi lokubalekela ...
Umdlalo webhodi ye-Escape Room kuyo yonke iminyaka ukusuka kwi-16 iminyaka. Inokuba yeyomdlali om-1 okanye kubadlali aba-2, kwaye injongo iya kuba kukusombulula uthotho lweepuzzles kunye neepuzzle, hieroglyphs, amaqhina, i-sudokus, amagama anqamlezayo, njl. UCon unemizuzu emi-2 eyahlukeneyo yohambo lwemizuzu engama-60: IsiQithi saseNtongweni kunye neAsylum, kunye nemizuzu eli-15 eyongezelelweyo ebizwa ngokuba yiDnapped.
Devir - Phuma: Ubuncwane ...
Umdlalo webhodi ye-Escape Room enokuthi wonke umntu athathe inxaxheba, ukusuka kwi-10 leminyaka ubudala kunye nabadlali aba-1 ukuya kwaba-4. Injongo kukuzintywilisela kuhambo olumnandi lokufumana ubutyebi obukhulu obuye batshona enzulwini yolwandle eSanta María.
Thenga Ubuncwane beSunken
Vula! IiHeroves zobuGcisa
Vula! Iziganeko zobuqhawe...
Lo mdlalo wohlobo lwe-Escape Room wazisa umdlalo wekhadi, kunye nethuba lokudlala ukusuka kwi-1 ukuya kwi-6 yabadlali, kwaye ilungele wonke umntu oneminyaka eli-10 ubudala. Ubude obuqikelelweyo bokusombulula lo mdlalo malunga neeyure ezi-2. I-adventure apho intsebenziswano kunye nokuphunyuka kuya kuba ngundoqo, kufuneka kulungiswe iipuzzle, iikhowudi zokuchaza, njl.
Thenga amaHeroic Adventures
Igumbi lokubaleka uMdlalo wesi-4
Lo mdlalo webhodi ye-Escape Room iqulethe ii-adventure ezi-4 ezahlukeneyo ezinokusonjululwa ngaphantsi kweyure enye. Ngamaqashiso, i-hieroglyphs, i-riddles, i-sudokus, i-crosswords, njl. Ngamanqanaba ahlukeneyo obunzima kunye nethuba lokudlala ukusuka kubantu aba-1 ukuya kwaba-3, ukusuka kwiminyaka eyi-5. Ngokumalunga neemeko ezibandakanyiweyo zezi: Ukuqhawuka kwentolongo, iNtsholongwane, iNuclear Countdown, kunye neTempile yaseAztec.
Diset- Igumbi lokubaleka lesibini ...
Olunye uhlelo lolu ngcelele lwemidlalo engaphezu kwe-16 kunye nabadlali aba-2. Imingeni, njengale ingasentla, ingasonjululwa ngaphantsi kwemizuzu engama-60. Kwaye kule meko, ii-adventure ezi-2 ezinokubakho ezothusayo zibandakanyiwe: ILake House, kunye nentombazana encinci. Uyafuna?
Igumbi lokubaleka uMdlalo wesi-3
Enye yeepakethi ezinomdla kakhulu, kunye nethuba lokudlala ukusuka kwi-3 ukuya kwi-5 abantu ukusuka kwiminyaka eyi-16. Ibandakanya yonke into oyifunayo kwi-4 yeyure ye-1 ye-adventures equletheyo: I-Dawn of the Zombies, i-Panic kwi-Titanic, i-Alice e-Wonderland, kunye nenye i-Dimension. Njengoko unokuthelekelela kumagama abo, kwimixholo eyahlukeneyo.
Igumbi Lokubaleka Umdlalo: Ihlathi
Ukuba ujonge umxholo ongakumbi kunye nolu hlobo lomdlalo, nazi ezinye ii-adventure ezi-3 ezingaphantsi kweyure enye. Ngobuninzi bemingeni kunye namanqanaba ohlukeneyo obunzima. Kule meko, iimeko ezibandakanyiweyo zezi: I-Magic Monkey, i-Snake Sting, kunye ne-Moon Portal. Ikwafanelekile kubantu abayi-1-3 kunye +5 iminyaka. UHlelo loSapho lokonwaba nonke kunye.
Eyaziwayo-iQela lokubaleka, ...
Umdlalo wohlobo lwe-Escape Room olungiselelwe abantwana ukusuka kwi-10 leminyaka ubudala. Inokudlalwa amaxesha amaninzi, kwaye ihlala imangalisa. Ngobuninzi bemibuzo kunye namaqhina ukuzama ukufumana izitshixo kwaye ubaleke kwigumbi phambi kwabanye. Inemibuzo engaphezu kwama-500: amaqashiso angama-125, ulwazi oluphangaleleyo lwe-125, amaqashiso ali-100, iingxaki zezibalo ezingama-50, ukucinga okusecaleni okungama-50 kunye nemingeni engama-50 yokubona.
Thenga Escape Party
Larousse-Indlu ye ...
Ukuba uyathanda uthotho lweSpanish oluloyiso kwiNetflix, iLa casa de papel, Igumbi lokubaleka liye ladlalwa. Kuyo unokuba ngomnye walabo abakhethiweyo ukuba benze ukuphanga kwenkulungwane kwi-National Mint kunye neSitampu seFactory eMadrid. Bonke abalinganiswa kunye nezigaba zesicwangciso esiya kufuneka silandelwe ukufumana ukuphanga.
Baleka eGumbi: Umnqa kwi-Observatory Mansion
ThinkFun 76368, Baleka ...
Lo omnye umdlalo kolu ngcelele uvumela ukuya kuthi ga kwi-8 abadlali ukuba bathathe inxaxheba, abaneminyaka engaphezu kwe-10. Apha abadlali baya kungena kumagumbi ale ndlu imangalisayo ukusombulula imfihlakalo, ukunyamalala kwesazi ngeenkwenkwezi esasisebenza apho.
Thenga iMystery kwindlu enkulu yokujonga
Phuma: Indlu Elahliweyo
Devir - Phuma: Indlu ...
Isetingi yalo mdlalo yindlwana eshiyiweyo, njengoko igama licebisa. Zonke zingqongwe ziimfihlakalo. Umdlalo webhodi we-Escape Room omnandi wobunzima obuphambili. Kwiminyaka eyi-12 ukuya phezulu, kunye nethuba lokudlala wedwa okanye ukuya kuthi ga kwi-6 abadlali. Kuqikelelwa ukuba kuyakuthatha phakathi kwemizuzu engama-45 ukuya kwengama-90 ukusombulula.
Thenga iKhabhinethi eLahliweyo
Phuma: uMboniso owoyikekayo
Devir - Phuma: Elungileyo...
Ukusuka kolu ngcelele lwangaphambili, ukwanalo nelinye iGumbi lokubaleka esekwe kukulunga okuyoyikisayo, kwabo bakhetha uhlobo oloyikekayo. Inokudlalwa ukusuka kwiminyaka eyi-10 ubudala, kunye nabadlali aba-1 ukuya kwaba-5. Asinto ilula, kwaye inokuthatha phakathi kwemizuzu engama-45 kunye nengama-90 ukuyisombulula.
Thenga Umboniso owoyikekayo
Imidlalo efihlakeleyo: Ityala loku-1-Ityala likaQuintana de la Matanza
Umdlalo ofihliweyo uvela...
Kukho amatyala amaninzi kolu thotho lweMidlalo Efihliweyo, enye yazo iguqulelwe kwiSpanish yile meko yokuqala. Zive njengomphandi kweli tyala. Umdlalo owahlukileyo, onombono omtsha owenza ukuba ube yinyani ngakumbi. Kuyo kufuneka uhlolisise amaxwebhu obungqina, uqinisekise i-alibis, kwaye utyhile umbulali. Bangadlala ukusuka kwi-1 ukuya kwi-6 yabadlali, ngaphezulu kweminyaka eyi-14 ubudala, kwaye kungathatha phakathi kweyure enye enesiqingatha kunye neyure ezi-1 ezinesiqingatha ukuyisombulula.
Thenga i-1st Case
Phuma: Ukufa kwi-Orient Express
Devir - Phuma: Ukufa kwi...
Iinoveli kunye neemuvi zenziwe malunga nesi sihloko sakudala. Ngoku kwakhona kuza lo mdlalo webhodi ye-Escape Room apho abadlali aba-1 ukuya kwaba-4 abaneminyaka eyi-12 nangaphezulu banokuthatha inxaxheba. Uhlobo luyimfihlakalo, kwaye ukusetwa nguloliwe wasentsomini, apho kuye kwenziwa ukubulala kwaye kufuneka usombulule ityala.
Thenga Ukufa kwi-Orient Express
Phuma: ISinister Mansion
Devir- Phuma 11, I...
Ukanti esinye isihloko ukongeza kuthotho Phuma. Yenzelwe ngaphezulu kwe-10 leminyaka ubudala kunye nabadlali aba-1-4, kunye nethuba lokusombulula imingeni emva kwemizuzu engama-45 ukuya kwengama-90. Eli bali lisekelwe kwindlu endala eselumelwaneni. Indawo ebalekayo, engaqondakaliyo kunye neyodwa eshiywe. Ngenye imini ufumana inqaku kwibhokisi yakho yeposi ekucela ukuba uye apho, apho udibana khona nabahlobo bakho. Ingaphakathi elimangalisayo kunye nomhlobiso ogcinwe kakuhle uyamangalisa. Kodwa ngequbuliso umnyango uyavala kwaye konke okuseleyo kukuzama ukufumanisa intsingiselo yenqaku.
Thenga iSinister Mansion
Phuma: IMyuziyam engaqondakaliyo
Devir - Phuma 10, iMyuziyam ...
Eli gumbi lokubaleka likuthatha likuse kwimyuziyam apho unethemba lokufumana imisebenzi yobugcisa, imifanekiso eqingqiweyo, imifanekiso eqingqiweyo, iirelics, njalo njalo, njengayo nayiphi na enye imyuziyam. Kodwa kule myuziyam akukho nto ibonakala ngathi, kwaye kuya kufuneka uzame ukubaleka, kuba uya kubanjiswa kwesi sakhiwo siyimfihlakalo.
Thenga iMyuziyam eyiMysterious
Imidlalo efihlakeleyo: Ityala le-2-I-Scarlet Diadem
Ngokufanayo kwimeko yokuqala, kodwa kule meko ufumana uphando malunga nokubiwa kwe-heirloom evela kwintsapho ecebileyo yezikhulu. Ibiwe kwimyuziyam yaseGreater Borstelheim kwaye umbhali ushiye umyalezo ongaqondakaliyo. Ngena ezihlangwini zomkomishinala kwaye ufumane abo banoxanduva lobu busela.
Thenga i-2nd Case
Phuma: Ingcwaba likaFaro
Devir - Phuma: Ingcwaba ...
Lo mdlalo uvumela abadlali aba-1 ukuya kwaba-6 abaneminyaka eyi-12 nangaphezulu. Yenzelwe ngokukodwa abo bathanda i-adventure kunye nembali yaseYiputa. Ibali lisekelwe kuhambo oluya eYiputa kwiholide, apho u tyelela zonke iintlobo zeendawo ezimangalisayo, ezifana nengcwaba laseTutankhamun, indawo ejikelezwe yimfihlakalo kwaye phantse imilingo. Njengoko ungena kwi-labyrinth yayo emnyama nebandayo, ucango lwelitye luyavaleka, uze uvaleleke. Ngaba uya kukwazi ukuphuma?
Thenga ingcwaba likaFaro
Phuma: ILebhu yeMfihlo
Devir - Phuma: I...
Esi esinye isihloko sikuthatha sikuse kwibali apho wena nabahlobo bakho nigqibe ekubeni nithathe inxaxheba kulingo lwezonyango. Xa sele ukwibhubhoratri, indawo ibonakala ingenanto, kwaye kukho umoya oyimfihlakalo. Irhasi iqala ukuphuma kwityhubhu yovavanyo kwaye uqala ukuziva unesiyezi de ulahlekelwe zingqondo. Nje ukuba ubuyele ezingqondweni, uyabona ukuba ucango lwaselabhoratri luvaliwe kwaye lukubambisile. Ngoku kufuneka usombulule amaqashiso ukuze uphume ...
Thenga iLebhu yeMfihlo
Phuma: Ubuqhophololo eMississippi
Devir- Phuma 14 Umdlalo, ...
Omnye umdlalo okwinqanaba eliphambili, kumagumbi okubaleka kakhulu. Inokudlalwa yodwa okanye ukuya kuthi ga kwi-4 yabadlali, kunye nobudala obungaphezulu kweminyaka eyi-12. Isihloko sevintage, esibekwe kwii-steamboats ezidumileyo, kunye nokuphanga phakathi. Enye indlela enkulu okanye ehambelana ne-Orient Express.
Lo mdlalo webhodi ye-Escape Room ngoweminyaka yonke ukusuka kwi-10 leminyaka ubudala, kwaye unokudlalwa ngabadlali aba-3 ukuya kwaba-5. Isihloko esilayishwe ngooqashi-qashi, i-hieroglyphs, i-sudokus, amagama anqamlezayo, amaqashiso, njl. njl., anosonjululwa ngaphantsi kweyure enye. Kule meko, iza ne-1 entsha ye-adventures egxile kuhambo lwexesha: Ixesha elidlulileyo, elikhoyo kunye nekamva.
Thenga Uhambo Lwexesha
Asmodee- Igumbi 25, ...
Isihloko sabadlali abasuka kwi-13 leminyaka ubudala. I-adventure epheleleyo esekelwe kwi-science fiction, kwikamva elikufutshane apho kukho umboniso wokwenyani obizwa ngokuba yi-Room 25 kwaye apho imigca ethile ebomvu igqitywe ukuzama ukufumana abaphulaphuli. Abaviwa baya kuvalelwa kwikhompleksi enamagumbi angama-25 eneziphumo eziyingozi nezingalindelekanga eziya kubabeka kuvavanyo. Kwaye, ukwenza nzima ukubaleka, ngamanye amaxesha kukho oonogada ababandakanyekayo phakathi kwamabanjwa ...
Thenga igumbi lama-25
Phuma: Isiqithi esilityelweyo
Devir - Phuma: Isiqithi ...
Eli lelinye igalelo elikhulu Phuma series. I-adventure ye-Escape Room yesitayile engaphezulu kweminyaka eli-12 ubudala kunye nethuba lokudlala ukusuka kumdlali om-1 ukuya kwaba-4. Umngeni unokusonjululwa malunga nemizuzu engama-45 ukuya kwengama-90. Kulo mdlalo ukwisiqithi esineparadesi encinci, kodwa xa uqonda ukuba sele kusemva kwexesha kwaye kuya kufuneka ubaleke ngephenyane elidala elibotshwe ngamatyathanga ekuya kufuneka ukhululwe ...
Thenga Isiqithi esilityelweyo
Ungawukhetha njani owona mdlalo ubalaseleyo weGumbi lokuPhunyuka
Ngexesha le khetha umdlalo webhodi ye-Escape Room, kubalulekile ukujonga izinto ezininzi, njengeminye imidlalo:
Ubuncinci beminyaka kunye nenqanaba lobunzima: Kubaluleke kakhulu ukujonga ubuncinci beminyaka yomdlalo wetafile ukuze bonke abadlali ojoliswe kubo bathathe inxaxheba. Ukongezelela, inqanaba lobunzima libuye ligqibe, kungekhona nje ukuba abancinci bathathe inxaxheba, kodwa kuxhomekeke kwizakhono zabantu abadala. Mhlawumbi kuyacetyiswa ukuba uqale ngezihloko ezilula kwaye ngokuthe ngcembe ufumane ezona zintsokothileyo.
Inani labadlali: Ewe, kukwabalulekile ukugqiba ukuba uza kudlala wedwa na, njengesibini, okanye ufuna umdlalo webhodi ye-Escape Room apho unokubandakanya amaqela amakhulu.
Umxholo: oku kwakhona kuba yinto yobuqu, yinto yokungcamla. Abanye bakhetha imixholo eyoyikisayo okanye eyoyikisayo, abanye intsomi yesayensi, mhlawumbi ibekwe kwimuvi abangabalandeli bayo, njl. Gcina ukhumbula ukuba nangona bezama ukuphinda benze amava okwenyani amagumbi okubaleka, iintshukumo kweminye yale midlalo yebhodi inokutshintsha.
Ngaphandle koku, kukwabalulekile ukwazi ezinye iinkcukacha ze Abavelisi yale midlalo, kwaye ufumanise ukuba yintoni na nganye ekhethekileyo kuyo, ukufumanisa ukuba yeyiphi enokuthi ilungelelaniswe kakuhle neemfuno zakho okanye izinto ozithandayo:
UKUVIKELA: Le bhodi yomdlalo webhodi iyile izihloko zayo ezicinga ngokwenza amava afana namagumbi oKubaleka wokwenyani, anamagumbi aphinde aphinda alungiswa ngobunyani.
Phuma- Le enye i-brand igxininise ngakumbi kwimingeni yengqondo, iipuzzle kunye ne-sudokus ezifuna ukusonjululwa, kwaye ziye zahlula ngokwamanqanaba (abaqalayo, abaphakathi kunye nabaphambili).
Escape Room The Game: olu ngcelele lubonelela ngomoya ongcono kunye nokuntywiliselwa, kunye nemidlalo ecokisekileyo kakhulu kumbono wokubonwayo, izinto eziphathekayo, kunye nee -apps eziphathwayo zokubeka izandi okanye umculo ongasemva.
Fihla Imidlalo: ijolise kwabo bathanda ngakumbi uhlobo lwamapolisa kunye nolwaphulo-mthetho. Beza kwimvulophu yekhadibhodi ngokungathi lityala lokubulala lokwenyani, njl., kwaye apho ufumana yonke into oyifunayo ukuze uphande kwaye ufumanise ukuba kwenzeke ntoni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndinike ixesha lokuphola » ngokubanzi » Eyona midlalo yebhodi ye-Escape Room
Eyona midlalo ilungileyo yebhodi yabantwana